Umhla wokubonisa weXiaomi Mi Mix 3 sele usemthethweni | I-Androidsis
Amarhe malunga neXiaomi Mi Mix 3 ebeze kuthi iiveki. Nangona kude kube ngoku, akukho nto ibisaziwa malunga nomhla wokubonisa kwesi sixhobo. Kukho intelekelelo eninzi kunye nomhla wokuqaliswa kwayo, kodwa umenzi waseTshayina ebengekathethi nto. Kude kube ngoku, ekugqibeleni babhengezile umhla wokubonisa kule fowuni intsha.
Ku malunga ne Isizukulwane esitsha sefowuni esinezakhelo ezincinci kwikhathalogu yakho. Le Xiaomi Mi Mix 3 ithembisa ukuvelisa inzala enkulu phakathi kwabathengi, kuba uphawu luye lwazisa utshintsho olwahlukeneyo kuyo. Ngomhla wenkcazo yakho akuyi kufuneka silinde ixesha elide.
Iya kuba nge-25 ka-Okthobha xa le Xiaomi Mi Mix 3 iboniswa ngokusemthethweni. Iqinisekisiwe yinkampani ngepowusta efakwe kwinethiwekhi yoluntu yaseTshayina uWeibo. Ke ngaphezulu nje kweveki sizokwazi ukubona le fowuni intsha ivela kumenzi waseTshayina.
Amarhe amaninzi afikile kuthi malunga nale fowuni. Phakathi kwabo, yayiza kuba nekhamera yokuhambisa, njengaleyo siyifumana kwi-OPPO Fumana u-X. Nangona kubonakala ngathi kule meko kuyokwahluka. Ukusukela kwifowuni yeXiaomi, ayizukuba yikhamera eslayidayo, iya kuba siscreen esinokubakho.
Ngelo xesha ayaziwa ngokuchanekileyo ukuba le nkqubo iza kusebenza njani yesikrini seXiaomi Mi Mix 3. Nangona sinomdla wokubona ingqikelelo entsha eyaziswa ngumenzi waseTshayina kwintengiso. Ithembisa ukuvelisa uninzi lwezimvo.
Nge-25 ka-Okthobha sinokuqeshwa kunye nophawu, Ukunikezelwa kwale Xiaomi Mi Mix 3. Ngokunokwenzeka, kwiintsuku ngaphambi kokunikezelwa kwayo, idatha iya kuba ivuza, okanye mhlawumbi imifanekiso yokwenene yesixhobo. Siza kuzimamela ezi ndaba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » IXiaomi Mi Mix 3 sele inomhla wentetho